China Electronic keratometer SW-100 Kugadzira uye Fekitori | SDK
Kuyerwa kwekupetwa kwenzvimbo yepamberi yekorneya ne keratometer kunogona kupa hwaro hwekusarudza rakakombama base curve yeiyo yakapfava yekuonana lens. Inogona zvakare kushandiswa kuongorora iyo corneal astigmatism kuburikidza nekeratometer kupa chirevo che optometry.
Iyo keratometer inoshandiswa kuyera kukamurwa kwemeridani yega yega kumberi kwenzvimbo yekona iyo inenge 3mm pakati, ndiko kuti, nharaunda yekukombama uye kupindika, kuti uone kana cornea ine astigmatism, astigmatism, uye axial kutungamira.
Iwo makiriniki mabasa e keratometer ndeaya anotevera:
2. Wongorora kuomarara kwema lenzi mushure mekupfeka.
Kana iyo astigmatism iri mu optometry haina kuenzana ne astigmatism inowanikwa ne keratometer uye axis haina kuenderana, zvinoreva kuti iyo astigmatism musanganiswa we corneal astigmatism uye intraocular astigmatism.
4. Kune zvimwe zvirwere zvemukati, senge keratoconus uye keratoconus, keratometer inogona kushandiswa sehwaro hwekuongorora. Kuyerwa kwe keratometer kunodiwa pakuona mwero wekuisirwa usati waiswa mukati meiyo intraocular lens uye dhizaini uye mhedzisiro yekuongorora kweakasiyana maitiro ekuratidzira. Uye zvakare, iwe unogona kudzidza nezvekuvanzika kwemisodzi uye zvichingodaro.
Iyo yemagetsi keratometer SW-100 inosanganisa zvemagetsi uye optics. Iyo inonyanya kushandiswa kuyera iyo corneal curvature radius uye diopter, uye inogona isina waya kuburitsa yekudhinda data.
Kugadziriswa kwenharaunda ye curvature:
Iko kutsauka kweiyo mikuru meridian axis kuyerwa kwemameter curvature:
Maziso anogona kutaridzirwa zvakananga kuburikidza nechidzitiro
Radhiyo ye curvature kuratidza uye diopter inoratidza maviri
Pashure: Akatungamira ziso chati chati bhokisi 5 metres E
Zvadaro: Optical chitoro optometry lens bhokisi-232